Iza aho? Pt. 2: nolaniana — Trip LEE - OFISIALY SITE
Vao haingana aho no namaky ny tantaram-piainany ny Steve Jobs, ny mpanorina sy ny mpahita fahitana ao ambadiky ny Apple, orinasa lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao. Tena mahaliana tokoa ny mamaky satria ny manam-pahaizana sy ny adala ny olona tamin'izany andro izany. Ny fiainany dia tena mahaliana hatramin'ny farany.
Nanomboka ny fiainany raha misy lehilahy sy ny vehivavy nihaona, nanana zaza alohan'ny nanambady, ary nomeny azy ho fananganana. Izany tena nanana fiantraikany mafy azy, satria nahatsiaro ho foana nandao, ary izy tatỳ aoriana iray nandao ny zanany.
Fa ny mahaliana ampahany amin'ny tantara dia ny tsara fanahy sy be fitiavana ny fianakaviana avy any California natsangany azy. Ary izy ireo naka azy tena sy nitondrany azy toy ny zanany. Ny dadako dia injeniera ary nanome azy ny fankasitrahana tsara-namolavola tamin-kafetsena ny zavatra. Ary ny ray aman-dreniny nanao sorona lehibe mba hanome azy rehetra fahafahana hahomby.
Ary be dia be ny fahombiazany ampahany tsy maintsy atao amin'ny olona izay nanaraka azy. Ireo miendrika azy. Na ny fomba antonona tiany rehetra nandray anjara tamin'ny toe-tsaina sy ny finoana fa afaka manao na inona na inona hitranga.
Ny zavatra momba ny fananganan-janaka tsara tarehy dia ny olona izay tsy manana andraikitra ny olona manapa-kevitra ny handray andraikitra. Izy ireo mahita ny ankizy manana na inona na inona mba hanolotra, ary dia manatitra azy ny zava-drehetra izy ireo. Ny zaza mahantra ary manaiky ny hanome ireo zavatra ilaina. Zareo tsy voatery manao izany, fa manao izany avy amin'ny hatsaram-panahy.
Ny fananganana ny olona toa ahy sy ianao dia mitovy amin'ny fomba maro. Andriamanitra dia tsy voatery hanaraka anay. Andriamanitra dia tsy voatery. Manana na inona na inona mba hanolotra azy. Malahelo mafy isika, ary Andriamanitra efa nampanantena ny hanome ireo zavatra ilaina.
Fa ny lehibe samy hafa dia hoe Andriamanitra no tsy nanangana kisendrasendra ankizy mihaona. Andriamanitra dia nanangana mpiodina, izay efa nanafintohina azy. Andriamanitra dia nanangana mpanao heloka bevava. Andriamanitra no nanangana tsara tarehy, fa ny mpanota tapaka. Tsy misy tahaka ny fananganan'anaka, satria tsy misy fitiavana tahaka ny.
Andeha isika hijery John 1:10 mba hanomboka ny fotoana iarahana.
"Teo amin'izao tontolo izao, ary no nanaovana izao tontolo alalany, nefa izao tontolo izao tsy nahalala Azy. Dia tonga tao an-, ary ny olona tsy nandray Azy. Fa izay rehetra izay no nandray Azy, izay nino ny anarany, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, izay naterany, tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa avy amin'Andriamanitra. " (John 1:10-13)
I. Teraka tao an-Family
Ny iray amin'ireo tombantombana mahazatra indrindra ao amin'ny firenena tahaka ny antsika dia ny olona rehetra dia zanak 'Andriamanitra. Fa izany tsy ny fampianaran'ny Baiboly. Milaza ny Baiboly fa rehefa ianao teraka, izahay tsy zanak'Andriamanitra, fa fahavalon'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia mampianatra zavatra mampatahotra kokoa, fa teraka isika zanaky ny devoly. Izany akory tsy midika fa manana tandroka, fa isika manaraka ny devoly sy ny ataontsika mijery bebe kokoa tahaka ny tsy tahaka ny.
Ary ny olona maro amin'izao andro izao no milaza fa toa mampihomehy sy tsy milefitra. "Mazava ho azy izahay zanak'Andriamanitra rehetra,"Mba hilaza. tsara, Eny, izahay rehetra nataon'Andriamanitra sy ny heviny izahay ny taranany, fa ny Baiboly dia midika hoe be kokoa rehefa miresaka momba ny maha-zanak'Andriamanitra. Toy izany koa ny maha samy hafa ny maha-ray niteraka zaza, nefa tsy tena hoe eo amin'ny fiainany, raha oharina amin'ny hoe olona iray dada, tia azy, milalao aminy, ary mikarakara ny zavatra ilainy.
Izany dia midika hoe tsy tahaka ho teraka tao amin'ny fianakavianao, izay matetika mitranga avy hatrany. Nisy ho fiovana, ny fahateraham-baovao, ny fiovam-po. Ianao ka tsy zanakalahy na zanakavavin 'Andriamanitra, satria ny ray aman-dreninao, na satria ny namana, na satria te ho.
Raha isika dia handeha ho lasa zanakalahy na zanakavavin 'Andriamanitra, efa ho nanangana any ny fianakaviany. Fa ahoana izany hitranga?
Raha mihevitra ny tenanao ho Kristiana, Tiako ianao mba manontany tena hoe nahoana. Rehetra izao, ary avy eo aho ho eo amin'ny fiaramanidina, ary aho manontany ny olona manaraka ny amiko: Izany ihany na tsy dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary izy ireo matetika hoe eny, ary aho hanontany azy ireo ny antony. Aho manontany azy izay miorina izany tamin'ny? No nandeha niakatra ny lalantsara, na mamerina ny vavaka, na mamaky ny andinin-?
Ny andininy milaza isika mamaky tsara tarehy fotsiny mazava tsara, "Izay rehetra izay no nandray Azy, izay nino ny anarany, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra…"Lasa zanak'Andriamanitra mitranga rehefa mandray an'i Jesosy. Ary ahoana no mandray an'i Jesosy? Amin'ny alalan'ny finoana ny anarany.
Noho izany sary an-tsaina an'Andriamanitra ho soa nataon'ny mpanankarena ity, izay manolotra ny hanangana olombelona tsirairay amin'ny tany toy ny zanany. Ary ny hany zavatra angatahany dia izay mandray ny zanany amin'ny finoana. Ary ianao eo amin'ny fianakaviana.
Inona ny dikan'izany?
Ankehitriny dia mahita tsy hoe fotsiny "nino ny fampianarany." Hoy izy "mino ny anarany."Misy fahasamihafana eo amin'ny tena lehibe mino ny fampianarana olona iray, ary matoky olona iray tena. Jaona dia nilaza fa mandray an'i Jesosy matoky ny olona-mino ny anarany, ary ny zavatra rehetra dia nanambara ny tenany ho.
Koa namana, Tiako ho fantatrao fa tsy ampy ho anao ny hoe, "Izaho mino ny sasany ny fampianaran'i Jesosy, Mino aho fa tokony hifankatia, Mino aho fa tokony handeha any am-piangonana. "Jaona no nanao hoe mandray azy dia midika hoe mino ny anarany! Mametraka ny fahatokiany amin'i Jesosy. Rehetra i Jesoa.
Amin'ny farany, misy karazany roa ny olona rehefa i Jesosy: Ireo izay mandà azy, noho izy ireo tia ny haizina ary ireo izay mino ny anarany.
“No nahatongavako ho amin'izao tontolo izao ho fahazavana, ka na iza na iza mino Ahy mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina.” (John 12:46)
Inona no atao hoe Tena Finoana?
Indraindray isika dia mihevitra fa ny finoana dia manaiky ny sasany marimarina ny amin'i Jesosy. Fantatro fa ny zavatra izay noheveriko. Fa ny finoana dia tena matoky azy. Izany dia midika hoe mahalala ny zava-misy mikasika ny hoe iza izy ary inona ny nataony izy, nanaiky amin'ireo zava-misy, ary matoky azy ireo-Betting ny fiainanao azy.
Efa miloka ny fiainanao izany? Efa vonona ny zava-drehetra hanipy ho any mahalala an'i Kristy?
Ianao mahita fa milaza amintsika kely mikasika ny dikan'izany hoe ho zanak 'Andriamanitra, mamaritra azy ireo ho toy ireo "izay teraka, tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa avy amin'Andriamanitra. "
Izy no nanao hoe: raha toa isika dia handeha ho ny zanak'Andriamanitra, isika mba teraka indray. Midika izany fa isika dia natao vaovao. Tena maty ny toetsika taloha. Ny fotoana voalohany izahay dia nateraka tsy marina izahay, ka mila ho teraka rehetra eo indray.
John tiany ho fantatsika fa ity fahaterahana hafa noho ny voalohany. Omeny toetra maro mba hahazoana antoka takatsika fa. "Tsy ny ra" fisehoana velon'ny tiany ho fantatsika fa tsy misy ifandraisany amin'ny taranaka voajanahary na ny razambeny. "Tsy avy amin'ny nofo" fisehoana velon'ny tiany ho fantatsika fa tsy avy amin'ny olona ny faniriana ara-nofo. "Na ny sitrapon'ny olona" fisehoana velon'ny tiany ho fantatsika fa tsy teraka kevitra ny olona. Io fahateraham-baovao dia avy amin'Andriamanitra!
Nateraka indray dia tsy ny andian-teny fotsiny ny olona niakatra amin'ny. Tena zava-misy ho an'ireo izay efa nanantena an'i Kristy rahateo. Ary izany zava-misy izay miova ny zava-drehetra. Andriamanitra dia manome anao fo vaovao, ary koa ny maso ny mijery azy, ary ny fanahiny mitoetra ao anatinareo. Ianao dia marika olom-baovao.
Ny fiheverana fa ianao tsy ho tratry ny ananany lasa fa ny ota dia misy diso ny eritreriny. Ianao no olom-baovao teraka indray ho any amin'ny fianakaviana 'Andriamanitra.
Zava-baovao no nitranga. Ianao tsy toy ny olon-drehetra intsony, ka ajanony miezaka ny ho tahaka azy ireo. Ianao niaraka tamin'ny ekipa vaovao amin'ny tanjona vaovao. Isika koa mba hahatakatra fa amin'ny fahateraham-baovao, Efa nanangana antsika ho fianakaviana. Noho izany dia manana olona ao amin'ny fianakaviana, ireo rahalahy sy rahavavy ao amin'ny finoana. Tiavo izy ireo. Amporisiho izy ireo. Eto izahay mba hanampy ny hafa hanaraka an'i Jesoa.
II. Tsaboina Tahaka ny Zanany
Raha misy fianakaviana mandany olona, izy no niezaka mafy mba hahazoana antoka ny Zaza Natsangana tsy mahatsapa ho toy ny ry zareo ny zaza natsangana. Tsy tiany izy ireo mba hahatsapa samy hafa sy hafahafa, na toy ny tsy natao. Tsy te-hitondra azy ireo toy ny ankizy hafa. Toy izany koa, rehefa mandany antsika ho lahy sy vavy, itondrany antsika tahaka ny Zanani-lahy Tokana, Jesosy.
Efa nandre olona niresaka momba ny tahirim-bola fitokisana zaza? Izany no olona izay manana ray aman-dreny manan-karena, ary fotsiny ny zava-misy fa efa teraka, ry zareo izao manan-karena koa. Dia ny olona hankahala azy ireo, satria ny olona hafa rehetra dia tsy maintsy niasa mafy fa ny zavatra efa. Angamba izy ireo mankafy ny tranony sy ny fampiononanao, fa tsy maintsy miasa ny fiainany manontolo. Etsy ankilany, manan-karena izany na oviana na oviana ankizy tsy maintsy miasa isan'andro teo amin'ny fiainany, fa izy no manao tsara kokoa noho ny olon-drehetra. Manana ny tombontsoa rehetra tsy manao akory va ny asa.
ara-panahy miteny, matoky isika tahirim-bola zazakely. Fotsiny araka ny toetsika ny ny zava-misy fa efa teraka indray ho efa ny fianakaviany, dia mahazo harena ara-panahy. Efa niaina izahay, nefa tsy araka ny lalàna, ary efa tsy nankatò azy, fa rehefa mametraka ny finoana an'i Kristy no mahazo ny tombontsoa rehetra Jesosy nahazo. Ny zava-drehetra ny asa vita Jesosy no nafindra ho antsika.
Andeha isika hiresaka momba vitsivitsy avy ireo zavatra.
"Fa ny noho nanao azy ho ota Izay tsy nahalala ota, ka dia Izy no mety ho tonga ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. " (2 Corinthians 5:21)
Jesosy mifamadika toerana amintsika. Izy tsaboina tahaka anay, ary atao tahaka azy tsaboina. Moa ve tsy mahatalanjona? Rehefa ianao noraisin'ny Andriamanitra, ianao nahita toy ny olo-marina ao aminy fa tsy toy ny maloto, zava-poana mpanota, fa tahaka ny olo-marina.
Izany dia tahaka ny olona iray mifamadika ny fitsapana vokatra. Izahay vao mahazo ny A + na dia tsy nahomby, ary mijaly i Jesosy ny sazy ho an'ny mahomby.
Fantatro indraindray rehefa tsy nitoetra teo amin'ny Teny ny fomba tokony ho, na rehefa tsy nisy ny fizarana ny filazantsara amin'ny hafa toy ny tokony ho, I manomboka mahatsapa toy ny an'Andriamanitra no misafoaka amiko. Ary avy eo izay miaro ahy tsy mivavaka, satria mahatsiaro ho toy ny tsy te-hihaino amiko. Tamin'izany fotoana izany manampy ny mahatsiaro fa rehefa nanangana ahy, dia nomeny ahy ny fahamarinana avy Jesosy.
Koa ny ahy: Tsy very saina intsony; dia ny sitrakao aho ao amin'i Kristy. Ny fahotana Malahelo azy, fa ny toerana ao amin'ny fianakaviany tsy miova. Tsy manao ny zavatra ilaintsika mba hahazoana any, ary misy na inona na inona azoko atao izay hanala ahy. Fotsiny aho Mila matoky sy fibebahana.
Izany koa dia manafaka ahy amin'ny fanandevozana ny miezaka hahafaly ny olon-kafa rehetra ny fotoana. Tena miady mafy amin'ny olona rehetra ny mieritreritra te tena ahy. Ary ny zavatra izay manampy ahy indrindra dia ny mahatsiaro fa tsy mila ny fankatoavana, satria efa manana ny. Aho efa tsara laza aminy. Aho ny fankatoavan'ny rehetra mandrakizay aho mila
Tena am-ponja ny miaina ny fiainanao amin'ny zavatra hafa mifototra olona mihevitra. Andriamanitra mihevitra fa tena ny anareo ao amin'i Kristy, ka aoka mba ho ampy. Manana ny fankatoavan'ny rehetra ianao ve mila.
2. Fiainana mandrakizay
Isika efa nahazo ny fahafatesana mandrakizay, Fa ao amin'i Kristy isika, mahazo ny hiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Izahay vao mahazo ny fiainana be dia be-aina araka izay natao mba ho velona. Izahay vao mahazo ny miaina ao anatin'ny fanompoam-pivavahana tanteraka ny Mpanjaka mandrakizay.
Ity fiainana ity dia tsy ny rehetra no manana. Nahoana isika no miaina toy izany? Isika tsy miraharaha ny zavatra manan-danja ho an'ny mandrakizay sy ny hanenjika ny zavatra izay mahafinaritra izao. Fa nahoana? Tsy ny tsara indrindra isika, mahazo. Izao no fotoana ananantsika eto an-tany mba hanome voninahitra an'Andriamanitra mandra-miaraka aminy any an-danitra.
Rehefa mieritreritra izany isika dia isika rehetra mahazo isika no tsy maintsy manao izay rehetra vitantsika mba hankafy ny tenantsika fotsiny. Fa rehefa fantatsika izany fotsiny ny topi-maso dia afaka mandany ny fotoanantsika mampiasa vola amin'ny mandrakizay.
3. ray be fitiavana & Care
Tiako ny zanako Tena. Ary hanao na inona na inona ho azy. Andriamanitra tia antsika ary hanome antsika tanteraka na inona na inona izay tsara ho antsika. Koa tsarovy raha toa ka misy zavatra tsy manana fotoana izao, fa tsy noho Andriamanitra dia tsy afaka ny hanome izany. Izany satria tsy tsara ho anareo.
Vao mainka nahita porofo ny zava-misy fa efa raisina ho tena zanak'Andriamanitra dia ny zava-misy fa afaka tsy ho tafasaraka tamin'ny ny fitiavany. Izahay tafaray amin'i Jesosy, Ary Jesosy nitondra anay ho any amin'ny Ray. Satria isika dia an'i Jesosy isika dia afaka tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra.
fanontaniana: Ary iza no hampisaraka ny zanak'Andriamanitra avy Aminy? valiny: Tsy misy afaka manasaraka ny zanak'Andriamanitra avy ny fitiavany.
"Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na mpanapaka, na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na ny zavatra hafa ao amin'ny zavaboary rehetra, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. " (Romanina 8:38-39)
Tsy misy na inona na inona amin'ny rehetra ny Famoronana izay afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Isika ny lahy sy vavy.
Rehefa ianao zanak'osy, no ve no manome anareo zavatra olona iray, dia miezaka ny haka azy indray? Ny anabaviko nampiasaina hanao izany tamiko. Izy dia manana zavatra fa tsy tena tia, ary avy eo izy no hanomezany azy ho ahy. I fako ho azy. Dia haka azy aho, manoratra ny anarako eo amboniny, hankafy izany-izany ny ahy. Eny ary ankehitriny fa Izaho no izany aho tena nankafy azy io, ary ankehitriny dia mijery ahy nankafy azy io ary tiany izany indray. huh? Tsara kosa talohan'ny tsy misy izany firaiketam-po manokana, izao ataoko. Ahy iny. Dia nanoratra ny anarany teo amboniny ary kevitra avy mahafinaritra fomba milalao izany. Toy izany koa amin'Andriamanitra. Ankehitriny izahay ny, dia manamafy antsika. Hoy izy, "Mine!"Tsy misy afaka haharombaka antsika niala taminy, ary ny fitiavany.
Tsy maintsy mahatsiaro izany rehefa mandalo fotoan-tsarotra. Tsy misy ny fotoan-tsarotra dia afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha ny marina, indraindray ireo fotoan-tsarotra ireo porofo ny zava-misy fa isika dia zanak'Andriamanitra.
Andriamanitra no manome antsika tsy hoe zavatra, fa manome antsika ny tenany. Rehefa nandao Azy niakatra nanaraka tanteraka firaisana ara-nofo, izahay nandao ny tena izy mba hitady ny sandoka. Afaka hihaona amin'Andriamanitra, ka henoy amin'ny azy isan'andro ny teniny. Dia hihaino ny vavaka sy mamaly azy. Raha manatona azy kosa, dia hanatona anareo.
III. Manaraka ny Zanany
Tsy hamela antsika aiza isika. Ary mahatonga antsika ho tahaka Azy bebe kokoa. Noho izany tsy hoe fotsiny no hitondra antsika tahaka an'i Jesosy, fa mahatonga antsika ho tahaka an'i Jesosy.
Niresaka momba ny hoe natao araka ny endrik 'Andriamanitra, ary efa tapaka. Tsara ny tonga lafatra i Jesosy no endrik 'Andriamanitra, ary Andriamanitra mifanaraka antsika ny endriny amin'ny alalan'ny mahatonga antsika tahaka an'i Jesosy. Isika manomboka hitovy izahay ao amin'ny fianakaviana.
Niresaka momba ny karazam-pinoana izany vonona ny handao ny zavatra rehetra rehetra, ary miloka an'i Jesosy. Rehefa mandany antsika Andriamanitra, tsy handao antsika aiza isika.
Vao niteny aho mpianatra sasany tamin'ny andro hafa momba ny finoana an'i Jesosy, ary ny olona iray nanao hoe:, "Mino aho, nefa mbola te mba hiala voly indraindray. Izany no mahatonga ahy tsy ho foana toy ny manodidina ny Kristianina. "Mety hisy zavatra sasany izay olona mino, fa ny karazam-pinoana ny Baiboly no miantso ho an'ny dia ianareo rehetra. Manova ny fomba hijery ny fahotana. Ianao miala aminy,.
Henoy ny zavatra Hoy i Paoly:
"Tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan 'Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo; na ny mpijangajanga, na ny mpanompo sampy, na mpanitsakitsa-bady, na ny olona izay manao ny firaisan'ny samy lehilahy, na mpangalatra, na ny tia vola, na mpimamo, na ny mpanaratsy, na ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan 'Andriamanitra. Ary toy izany ihany ny sasany aminareo. Fa ianareo efa voasasa, ianao no nohamasinina, ianao dia nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. " (1 Corinthians 6:9-11)
Ireo zavatra lasa henjana. Tsy voafaritra izahay noho ireo zavatra intsony.
Inona no hataonao raha nahita ny zazakely milaza ny ray aman-dreny izay tokony hatao? Mandady manodidina ny trano ny ray aman-dreniny nandidy manodidina? Ianao dia hieritreritra izy adala! Nahoana? Satria izy ireo ny ray aman-dreny, fa izy ireo dia manao toy ny zaza. It's mampalahelo ny olona rehefa manana fahefana sy tombontsoa sasany, fa tsy mety ka hanaraka azy. Izany aza crazier ho Kristianina ny miaina ao anatin'ny fahotana. Ianareo manam-pahefana amin'ny ota ary efa nomena ny tombontsoa handeha amin'ny fahafahana. Nahoana no tsy miraharaha fa ny hery sy mandeha amin'ny fanandevozana?
Amin'ny maha Kristianina, Andriamanitra dia efa nanao antsika masina. Ankehitriny isika dia miezaka ny hanao ny fiainantsika ho taratry hoe iza moa isika ao amin'i Kristy isan'andro. Raha ao amin'i Kristy ianareo dia tsy mpandainga. Ianao tsy pelaka. Tsy ianao mpangalatra. Ianao ny olo-masina. Izany zavatra tsy manan-kery aminareo intsony.
Tsy fantatro izay olona manana olana miaraka amin'ny eto androany, fa zava-dehibe ny mahatakatra fa ny sata fiovana nitranga, raha ianao ao amin'i Kristy. Tsaroako ny vanim-potoana eo amin'ny fiainana kristianina aho, raha tratra aho tao mahatsiravina tsingerin'ny ny fahotana. Ary nahatsapa toa aho andevon'ny ny fahotako. Ary ny ampahany lehibe 'ny fivoarana no mitantana izany fahamarinana: fa tsy hanota. I Efa nafahana tamin'ny fanandevozana taloha
Izay Miahy Indrindra About
Ny tena zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no mahatonga anao masina. More noho izy ny momba ny fampiononana, izy ny momba ny fahamasinana. ao amin'ny Hebreo 12, ny mpanoratra miresaka momba ny fitsipi-pifehezana eo amin'ny fiainantsika. Indraindray ny fiainana dia handratra. Fa ny mazava fa rehefa mandalo fotoan-tsarotra, tsy midika Andriamanitra tsy tia antsika. Raha ny marina dia tia antsika amin'ny alalan'ny fanomezana antsika fotoan-tsarotra. Izany famaizana izany teny ampiasaina midika hoe fiofanana. Andriamanitra no mampiofana antsika sy mahatonga antsika bebe kokoa an'i Jesosy. Izy no mahatonga antsika masina.
Mety ho tsy manam-pitiavana an'Andriamanitra mba tsy manazatra antsika sy hahatonga antsika masina kokoa. Mety midika izany fa tsy izahay ny zanany. Indraindray izy mihitsy aza mandroaka ny mifehy ny lalana noho ny fahotana. Rehefa manota, ary misy vokany mahatsiravina, Tsy raisiko ho toy ny kisendrasendra fotsiny. Tokony hihevitra fa Andriamanitra no manitsy anao. Izy no mampiseho aminao izay fahotana mitondra, ary izy no mamolavola anao mba hahatonga anao bebe kokoa tahaka an'i Kristy. Toy isika scrawny, ary fitsapana ho antsika Buff. Ara-panahy tonga lafatra i Jesosy buffness, ary Andriamanitra te hahatonga antsika tahaka Azy.
Farany izao no asan'Andriamanitra. Dia manao izany amin'ny alalan'ny ezaka, fa raha ao amin'i Kristy ianao dia afaka sady hahatanteraka izany. Koa aza loatra manakivy ny tenanao. Mety mahatsapa ho toy ny tsy afaka manova ny tenanao, ary izany no marina. Mandehana any amin'ny toerana izay Nampanantena Andriamanitra dia hanova anao.
Raha toa ianao ka Kristianina, zava-dehibe ny mahafantatra hoe iza ianao ary inona ny fampanantenan'Andriamanitra dia ho anao. Ianao efa natsangana. Zanak'Andriamanitra ianao, na zanakavavy 'Andriamanitra.
Zanako mahazo be dia be ny soa tsy ho zanako. I mikarakara azy, hanome ho azy, ary ho azo antoka fa ny sakafo. Ireo ihany tombontsoa tsy nanolo-kevitra ny ankizy rehetra manodidina fotsiny. Kanefa tsy midika tsy afaka ho natsangana.
Ny Filazantsara no tena manokana sy mampandray anjara hafatra eto amin'izao tontolo izao. Ireo fitahiana ireo dia mandeha ihany ny sasany, fa natao ho an'ny rehetra. Matokia ao amin'i Kristy. Andriamanitra no hanangana anao. Izy no hanome anareo zavatra mbola tsy nahazo-voalohany indrindra ny fifandraisana aminy.
1. Inona no maha samy hafa no manao raha zanak'Andriamanitra ianao?
2. Inona no karazan-samy hafa ny olona dia tokony manodidina ahy aho mahita raha ao amin'ny fianakaviana?
3. Inona no tena feno fankasitrahana ianao noho ny maha-zanak 'Andriamanitra?
4. Inona no zava-misy fa ianao efa afaka amin'ny ota hanova ny fomba hiady izany?
5. Inona no anjara asan'ny Tenin'Andriamanitra no hilalao amin'ny lasa bebe kokoa tahaka an'i Jesosy?
6. Inona no ataonao raha tsy mitombo tahaka ny tokony ho?